Home Category Lifestyle Health & Beauty
နေ့တိုင်း ဘရာစီယာဝတ်မယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ
မျက်နှာအမွေးအမျှင်ပေါက်ခြင်းကို သဘာဝအတိုင်းတားဆီးဖို့ နည်းလမ်း (၅)ချက်
မျက်နှာအမွေးအမျှင်ရှိခြင်းက အဖြစ်များပြီး ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အချို့သောကိစ္စတွေမှာ နက်မှောင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အမွေးတွေက သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါ်လာနိုင်ပြီး နေ့စဉ်နီးပါး ဖယ်ရှားရတာမျိုးကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီမနှစ်မြို့ဖွယ် အခြေအနေကို hirsutism လို့ခေါ်ပြီး သူတို့က ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ Waxing နဲ့ laser hair romoval က မလိုလားအပ်တဲ့ အမွေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း သူတို့ကို...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီမပါဘဲ သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိတ်ကပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
မှန်ကန်သော မိတ်ကပ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ သဘာဝအသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အခါမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အသားတူတဲ့ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ကပ်တစ်မျိုးတည်းသုံးတဲ့အခါ နောက်ဆုံးရလဒ်က ကွဲပြားတာကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ undertone ဖြစ်ပါတယ်။ မှားယွင်းတဲ့ မိတ်ကပ်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်မိတဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံကုန်ရတာက တော်တော်စိတ်ပျက်စရာပါ(စျေးကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ စျေးပေါသည်ဖြစ်စေပေါ့)။ သင့်ရဲ့ အသားအရောင်အစစ်အမှန်ကို သိပြီး သင့်ရဲ့ လှပထူးခြားသောအသားအရေတွေအတွက် သင့်လျော်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့...
အသက်က ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလောက်သာလို့ ကျွန်မတို့အားလုံး ပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း မှန်ထဲမှာ တွေ့နေရတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေ ၊ fine linesတွေက ကျွန်မတို့ကို အိပ်မပျော်တဲညတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီ retinol , co-enzyme Q-10 နဲ့ အခြားသော အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ ကုထုံးတွေက အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသုံးပြုတဲ့အခါ အိုမင်းရင့်ရော်မှု လက္ခဏာတွေကို တားဆီးလျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...
အချို့သော လူတွေ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ Gym မှာ သေချာကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် စားသောက်ကြပေမယ့် သိသာထင်ရှားစွာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ခက်ခဲတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ တတ်နိုင်သလောက် ကယ်လိုရီနည်းတာကိုသာ စားကြပြီး ကယ်လိုရီအများဆုံးလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ကြိုးစားကြပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ အရေးတကြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့် အဓိက ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အိပ်စက်ခြင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ တခြားအချက်တွေကို...
ရုပ်ရှင်ရုံသွားရင် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်နဲ့ ကိုလာက မဝယ်မဖြစ်ဝယ်ကြတဲ့ သရေစာဖြစ်ပါတယ်နော်။ သို့သော် သင်ဟာ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် ပုံမှန်စားတဲ့သူ၊ ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ရင်တောင် အထူးသဖြင့် သင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဒီစားစရာအကြောင်း သင်မသိနိုင်သေးတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။။ ဒီနေ့မှာတော့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်နေ့တိုင်းစားရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ဝမ်းချုပ်တာကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်က ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းစားတဲ့ အမိုက်စား အစားအစာတစ်ခုသာ...
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချဖို့ အကြံပြုချက် (၆)ချက်
ရောင်ရမ်းခြင်းက စိုးရိမ်ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာ၊ လက်နဲ့ ခြေထောက်တွေ ဖောင်းနေတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့က တော်တော်လေးလည်း သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ပါဘူး။ ဆားလျှော့စားတာမျိုးလို အခြေခံအချက်တွေ လုပ်ဖို့ ၊ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုအပ်နိုင်တဲ့အပြင် သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် နောက်ထပ်အကြံပြုချက်တချို့လည်း ရှိပါတယ်။ ၁။ တစ်နေ့ကို သကြားတစ်ဇွန်းထက် ပိုမစားပါနဲ့...
ဆံကေသာ စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သင့်သူငယ်ချင်းအတွက် အကျိုးထူးတဲ့အရာတွေက သင့်အတွက်ဆိုရင် အလုပ်မဖြစ်ဘဲ လုံးဝကွဲပြားနိုင်တာမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေက နေ့စဉ် (သို့) ရံဖန်ရံဖန်မှာ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ အလေ့အထတွေက ဆံပင်တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆံပင်ပြုစုခြင်စာရင်းမှာ အရာအားလုံးကို ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ တစ်ခုခုလွဲချော်နေသေးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ အများစုက သတိပြုမိကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံပြီး...
ဗိုက်သားလေးတွေ သွယ်လှချပ်ရပ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ၅ ခု
တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မိန်းကလေးတိုင်းက မှန်ကိုကြည့်တဲ့ အခါတိုင်း၊ အဝတ်အစားဝတ်တဲ့ အခါတိုင်း စိတ်ဖိစီးမှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဗိုက်ပူနေတာက အများအမြင်မှာ မသိသာနေရင်တောင်မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု မရှိ စိတ်လုံခြုံမှု မပေးနိုင်ပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်ကအဆီတွေကို ကျချင်တဲ့ စိတ်ရှိနေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး ကိုယ်တိုင်းလုပ်ယူမှလည်း လိုချင်တဲ့ သွယ်လျလှပတဲ့ ခါးလေးကို ရရှိမှာပါ။ လှပပြီး ကျစ်လစ်ချပ်ရပ်နေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်သားလေးတွေက မိန်းကလေးတိုင်းကို...
အသားအရေ ကော်လာဂျင်ကို ပြန်လည်မွေးဖွားပေးနိုင်သော အလှအပဆိုင်ရာကုသမှု (၁၀)ခု
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အရေပြား ကော်လာဂျင်ကို ပြန်လည်မွေးဖွားပြီး နုပျိုတဲ့အသွင်ကို ရရှိစေမယ့် နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သို့သော် ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကို သက်တမ်းတိုးဖို့ အရေးကြီးဆုံး နည်းလမ်းက ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြား ကော်လာဂျင် ပြန်လည်သန်စွမ်း တိုးပွားလာဖို့က အလှအပ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ အသားအရေအသွင်အပြင်ကို ပူပန်နေသူတွေရဲ့ စွဲလမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေ တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်နေဖို့က ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ထည့်စဉ်းစားတာက အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။...
ကိုရီးယားမလေးတွေလို အသားအရည် ကြည်လင်စေဖို့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း ၆ သွယ်
မွဲခြောက်နေတဲ့ အသားအရည်ကို ဘယ်သူမှ မလိုချင်ကြပါဘူး။ မိန်းကလေးတိုင်းက ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ အသားအရည်ကိုသာ လိုလားကြပြီး အထူးဂရုစိုက် တတ်ကြပါတယ်။ အသားအရည် ကြည်လင်တောက်ပဖို့ စျေးကြီးတဲ့ product တွေ မသုံးနိုင်ရင်တောင် နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကိုပဲ ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်ပေးရင်တောင် ကျန်းမာဝင်းပတဲ့ အသားအရည်ကို ရနိုင်တယ်ဆိုတာရော မေ့နေပြီလား? ကျွန်ုပ်တို့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့နေရတဲ့ မတူညီတဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု...